ဒီဂျစ်တယ်နှင့်အသံတီထွင်မှုလက်ထောက်ဒါရိုက်တာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့အသံဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
အဆိုပါဟေးလ်ကျောင်းမစ်ရှင်: အဆိုပါဟေးလ်ကျောင်းကောလိပ်, အလုပ်အကိုင်များနှင့်အသက်အဘို့တိုင်းပြည်အနှံ့ကနေနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးပြင်ဆင်ကြရသည်။ တစ်မိသားစုကျောင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာလစ်ဘရယ်အနုပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွင်းကျနော်တို့ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်များစိန်ခေါ်; ထင်နှင့်အကြောင်းပြချက်; မပြည့်စုံလိမ့်မည် ဘုံကောင်းသောအစေခံ, နှင့်ထူးခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်များကပဲ့ထိန်းကမ္ဘာ၏နိုင်ငံသားများအဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပြင်ဆင်, "သမျှအရာစစ်မှန်တဲ့ Are ။ "
အဆိုပါရာထူး၏မစ်ရှင် / ရည်မှန်းချက်: အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး, ညဏ်အစည်းအဝေးများအစပျိုးစိတ်ကူးယဉ်အယူအဆ generate, ငါတို့မဲဆန္ဒနယ်မှထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ audio ထုတ်ကုန်ဖန်တီးနှင့် The Hill ကကျောင်းအမှတ်တံဆိပ်ခြီးမွှောဖို့ဖန်တီးမှုအဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါရာထူး၏အကျဉ်းချုပ် - Key ကိုရလဒ်များဧရိယာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့အသံဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကျောင်းသားများ, မိဘများ, အလားအလာ famimlies, ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်ဝန်ထမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်ဟေးလ်များအတွက်ဇာတ်လမ်းပြောပြပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ audio သတင်းစာပညာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သူ / သူမဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့် Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram ကို, Youtube, Snapchat နှင့်အခြားထွန်းသစ်စကွန်ရက်များအပါအဝင်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအနှံ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး, စတင်ပုံဖော်, နှင့် The Hill ကန့်မဲဆန္ဒနယ်မှများအတွက်ထူးခြားသောစကားကိုနားထောငျ-ပထမဦးဆုံးအတှေ့အကွုံမြားသို့အကြောင်းအရာနှင့်အတွေ့အကြုံများကို၏ကျောင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုပြောင်းလဲဘို့တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။
လူမှုမီဒီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှု: ယင်းဖန်တီးမှုအဖွဲ့နှင့်အတူလက်တွဲခုနှစ်တွင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီခြင်းနှင့် Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram ကို, Youtube, Snapchat နှင့်အခြားထွန်းသစ်စပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အဆိုပါဟေးလ်ရဲ့လူမှုရေး profile များကိုနှင့်ရှေ့မှောက်တွင်တည်ဆောက်ရန်မှာပြည့်စုံသောလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအပြည့်အဝ, လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနားလည်လူမှုရေးစကားပြောဆိုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရခြင်းကိုနှစ်သက်သူနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် audience.The လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းကိုမည်သို့မသိကြလိမ့်မည်အားလုံး shared အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်သေချာပါလိမ့်မယ် လူမှုရေး-အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့နှင့် တစ်ဦးချင်းစီသီးခြားပလက်ဖောင်းများအတွက်သင့်လျော်သော။ သူ / သူမအားလုံးအွန်လိုင်းမှတ်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသီးအသီးမှတုံ့ပြန်မည်။
audio သတင်းစာပညာ: အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး branded အသံအာကာသ podcasts တွေကိုနှင့်အသံသတင်းစာပညာတစ်လွှားဖြစ်ပေါ်နေသောဘယ်လိုတစ်ခု In-depth ကိုနားလည်မှုရပါလိမ့်မယ်။ သူ / သူမလိမ့်မည် အဆိုပါဟေးလ်ရဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ အသံအစပျိုးခြင်းနှင့် Podcast တခုကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာ။ အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အသံစျေးကွက်၏ရငျးနှီးသတိထားမိပါလိမ့်မည်နှင့်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏နက်ရှိုင်းသောအသိပညာရှိပါလိမ့်မယ်။ သူ / သူမဟေးလ်ကျောင်းဒြေ, ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဆွဲဆောင်မှုအသံပုံပြင်များနှင့် Podcast တခုကိုရှိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။
voice-ပထမဦးစွာနည်းပညာ: အဆိုပါလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကျောင်းရဲ့ဆက်သွယ်ရေး repertoire သို့အသံပထမဆုံးနည်းပညာသုတေသနနှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်မည်ဖြစ်သည်။ သူ / သူမစုံစမ်းမည် သူတို့ဒီဟေးလ်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်စကားသံကို applications များ။
s ကို / သူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ဆရာ, ဆရာမ, ကျောင်းသား, ကျောင်းသားဟောင်းများ, မိဘ, ဆရာ, ဆရာမများ, ဝန်ထမ်းများနှင့်အစီအစဉ်ကိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဖြစ်နွေးထွေးမှု, sensitivity ကိုများနှင့်နားလည်မှုနှင့်အတူထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆို။
ဌာန၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စိတ်အားထက်သန် - "အဝန်ဆောင်မှုသဘောထားကို" အပိုင်။
တက်ကြွစွာအခါအားလျော်စွာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းကဖြစ်ရပ်များ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြပွဲနှင့်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာအလွန်အမင်းမြင်နိုင်ရှိနေခြင်းဖြစ်ခြင်း, သင်ရိုးများနှင့်တွဲဖက်သင်ရိုးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်လာသဖြင့်အဆိုပါတောင်ကျောင်းများ၏အသက်တာ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်။
နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ / အရည်အချင်းများ:
ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ audio ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလုပ်အတွေ့အကြုံနှစ်ခု (2) နှစ်၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး။
အသံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နည်းစနစ်များကိုသရုပ်ပြအသိပညာ: စိတ်ကူး, scripting နည်း, ကွက်ကို, သေနတ်ပစ်, တည်းဖြတ်, ကို web သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှအပြီးသတ်။
in-depth ကိုအသိပညာနှင့်နားလည်မှုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ, ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသားများကို (စတာတွေက Facebook, Twitter Instagram ကို, Youtube, Linkedln,), ပရိုမိုးရှင်းများနဲ့ကြော်ငြာနှင့်မည်သို့တစ်ဦးချင်းစီပလက်ဖောင်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွေမှာတပ်ဖြန့်ထားနိုင်ပါတယ်။
keyword ကိုသုတေသနနှင့် Google Analytics မှအပါအဝင် SEO ဆိုသည်မှာ၏အခြေခံမူတခုအလုပ်လုပ်အသိပညာ။
Premiere / နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကိုသို့မဟုတ်လည်း iMovie, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်စာရင်းစစ်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်။
အောင်မြင်သော podcasts တွေကိုစတင်ထဲမှာအသံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ fluency ။
self-လှုံ့ဆော်, လူတွေ, အတွေ့အကြုံများ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်-to-မဲဆန္ဒနယ်ဆက်သွယ်မှုဖွဲ့စည်းရန်ဆန်းသစ်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုအလွန်အမင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်စု။
တစျခုတစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာစီမံကိန်းများကို / လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်ကြီးမားတဲ့ပမာဏစီမံခန့်ခွဲဖိအားအောက်တွင်အလုပ်နှင့်နေဆဲသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်, ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ချက်ထည့်သွင်းခြင်း, ပြောင်းလဲနေတဲ့ဦးစားပေးဖို့လျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှု။
သာလွန်စည်းရုံးရေး, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပါးစပ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု။
လှံ & Arrows virtual reality 2018-05-26
ယခင်: စစ်ဆင်ရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဗီဒီယိုသိမ်းယူမှုနှင့် Compression ကိုနည်းပညာ (VACT)